Onkodyadii ugu weynaa dunida iyo diiwaanka Maracaibo | Saadaasha Shabakadda
Duufaanta korantadu waa dhacdo saadaasha hawada oo inta badan lagu gartaa danab iyo hillaac, oo ay weheliso saameynteeda dhawaaqa. Waxay ku samaysmaan daruuro waaweyn oo loo yaqaan 'cumulonimbus'. Onkodka badanaa waxaa la socda dabaylo xoog leh, roob culus, iyo sidoo kale roobdhagaxyaale. Inkastoo aysan muhiim ahayn.
Magaalada caasimada u ah hillaaca ee ay shaacisay NASA, waa Maracaibo. Haddii dhawaan aan wax ka qornay waxa ay gobolka adduunka oo ay ka diiwaan gashan yihiin biyo-mareeno badanSidoo kale waa goobta lagu duubo duufaanno koronto oo badan. Magaalada Ologá, oo ku taal harada Maracaibo, waa mid ka mid ah meelaha ugu macquulsan in habeen xasilloon lagu qabto. Celcelis ahaan 297 onkod ayaa sanad walba la sii daayaa.
Baaxadda ay gaarayaan
Xaraarayn 1,6 milyan oo hillaac ayaa sannad walba dhaca wadar ahaan, isku celcelis. Gobolkan Venezuela sidoo kale waa goobtii ka xayuubisay webiga Koongo dooxada Afrika, sida meeshii uu danabku ku dhuftay. Kadib daraasad taxaddar leh oo uu sameeyay saynisyahanka NASA Richard Blakeslee. Daraasada waxaa lagu daabacay joornaalka Ururka Saadaasha Hawada Mareykanka (AMS). Waana in dhacdadani ay caan ku tahay Venezuela, loona yaqaan danabkii Catatumbo.
Hadaanay ahayn, inkasta oo loogu yeedho hillaaca Catatumbo, Waa dhacdo la arki karo oo dhan Badda Maracaibo. Ka dib 17 sano oo aan ururinay macluumaad iyo xog waxaan uga mahadcelinayaa dayax-gacmeedka "Tropical Rainfall Measuring Mission", oo ay NASA gelisay hareeraha si loo cabbiro saamaynta duufaannada kulaylaha. Blakeslee waxay kaloo ku dartay, muhiimada ay leedahay in la fahmo ifafaalahan heer kulka ay biyuhu gaari karaan iyo la xiriirta isbedelka cimilada.
Markaa waa mid ka sarreysa oo gaar ah Catatumbo danab, xitaa Waxaa laga codsaday inay ahaato dhaxal dhaqameed aan la taaban karin oo ay leedahay Unesco. Sidan ayaa cinwaankan lagu qaadi lahaa, iyo kan hadda socda Diiwaanka Dunida Guinness taageeraya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Duufaanadii korantada ugu weynaa adduunka iyo diiwaanka Maracaibo